आज सोमबार श्री पशुपतिनाथले हामी सबैको रक्षा गरून् !! एक शेयर गर्दै भेटी चढाएर राशिफल पढ्नुहोस् । तपाईको मनोकामना पुरा हुनेछ ।। - Hulaki Samachar
मुख्य पृष्ठ /राशिफल/आज सोमबार श्री पशुपतिनाथले हामी सबैको रक्षा गरून् !! एक शेयर गर्दै भेटी चढाएर राशिफल पढ्नुहोस् । तपाईको मनोकामना पुरा हुनेछ ।।
आज सोमबार श्री पशुपतिनाथले हामी सबैको रक्षा गरून् !! एक शेयर गर्दै भेटी चढाएर राशिफल पढ्नुहोस् । तपाईको मनोकामना पुरा हुनेछ ।।
आज पाथीभरा माताको मन्दिरलाई एक शेयर गर्दै भेटी चढाएर राशिफल पढ्नुहोस् । तपाईको मनोकामना पुरा हुनेछ
सोमबारको दिन भगवान श्री पशुपतिनाथको मन्दिरलाई एक शेयर गर्दै भेटी चढाएर २०७६ बैशाख २३ गते सोमबारको राशिफल पढ्नुहोस् । तपाईको मनोकामना पुरा हुनेछ! #जयश्रीपशुपतिनाथकी_जय_जय_जय
शनिबारको दिनमा साढे सातको शनिदोष हटाउन संकटा देवीलाई एक शेयर गर्दै भेटी चढाएर २०७६ बैशाख २१ गते शनिबारको राशिफल पढ्नुहोस् । तपाईको मनोकामना पुरा हुनेछ ।#जय_संकटादेवी !!
मंङ्गलबारको दिनमा गणेश भगवानको फोटोलाई एक शेयर गर्दै भेटी चढाएर २०७५ चैत्र १९ गते मङ्गलबारको राशिफल पढ्नुहोस् । तपाईको मनोकामना पुरा हुनेछ ।। #जयगणेश_भगवान